प्रदेश ५ को भैरहवामा कोरोनाको परीक्षण सुरु – Health Post Nepal
प्रदेश ५ को भैरहवामा कोरोनाको परीक्षण सुरु
२०७६ चैत २३ गते १७:५१
अब कोरोना परीक्षण निजि र सामुदायिक अस्पतालले गर्न पाउने
कोरोना परीक्षणमा बढी रकम असुल्ने अस्पताल कारबाहीमा
प्रदेश नम्बर ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण सुरु भएको भएको छ। रुपन्देहीको भैरहवास्थित राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान केन्द्रमा रहेको दुई तले भवनमा प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण सुरु गरिएको हो। यससँगै सातवटै प्रदेशमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सम्भव भएको छ।
आइतबार बिहान प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको उपस्थितीमा ल्यावको परीक्षण गरिएको हो ।
प्रयोगशाला एक दिनमा १५/१६ वटा स्याम्पल परीक्षण गर्न सकिने छ। सामान्यतया १ घण्टामा कोरोनाको एउटा रिपोर्ट प्राप्त सकिने छ। चैत १० बसेको प्रदेश नम्बर ५ मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले तत्काल प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरी कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. राजेन्द्र कुमार गिरीले प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि भवनको आन्तरिक संरचना बनाउँदा भत्काउनु पर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको बताए। प्रयोगशालाको लागि आवश्यक मेसिन र विज्ञ जनशक्ति संघिय सरकारले उपलव्ध गराएको प्रदेश सरकारको भनाई छ।
प्रयोगशालाका लागि एक जना कर्मचारी सघीय सरकारले पठाएको छ भने अन्य कर्मचारी प्रदेशबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। आवश्यक ४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भने प्रदेश सरकारसँग मागिएको डा. गिरीले जानकारी दिए।
प्रदेशभित्र कोरोनाको जाँच गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा आइसोलेसन अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
लकडाउन अघि जहाजबाट स्वाब पठाउने गरिए पनि अहिले हवाईसेवा बन्द भएपछि गाडीमा पठाउने गरीएको थियो। यसरी स्याम्पल पठाउँदा सामान्यतया तीन दिनमा रिपोर्ट प्राप्त हुने गरेको थियो।
Tags: कोरोना परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण